SARCOIDOSISUK NATIONAL ပဟေဠိဧပြီ 2018
ဧပြီလတစ်လျှောက်လုံးအပေါငျးတို့သ SarcoidosisUK အမျိုးသားပဟေဠိဖြစ်ရပ်များအံ့ဖွယ်အောင်မြင်သောခဲ့ကြသည်!
စုစုပေါင်းအတွက်ပဟေဠိကြီးပြင်း £6,800! ဤကိန်းဂဏန်းကိုဗြိတိသျှအဆုတ် Foundation ကနှစ်ဆနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ 20th နှစ်မြောက်ကင်ပိန်းကိုဦးတည်ထားလိမ့်မည်။
ဒါ့အပြင်ဂုဏ်ပြုလွှာမှထွက်ဝင် '' ကုမ္ပဏီ B က '' တစ်ခုအံ့သြစရာသွင်းယူသောသူ Cornwall ကနေအသင်း 99 မှတ် နှင့်ဒါ SarcoidosisUK အမျိုးသားပဟေဠိ Winners 2018 သရဖူဆောင်းခဲ့လေပြီတကား
သင်က SarcoidosisUK ဒိုင်းဆုနှင့်ဆုရှင်ရဲ့ရှန်ပိန်နှင့်အတူလက်ဝဲဘက်သူတို့ရဲ့ရုပ်ပုံလွှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်သူမအတော်လေးသေးမွေးဖွားမခံခဲ့ရသော်လည်းအဆိုပါပဟေဠိမှလာသောကုမ္ပဏီ B က၏နောက်ဆုံးပေါ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ အခုတော့ကြောင်းအပျနှံပါ!
1st Place - '' ကုမ္ပဏီ B ကို '- Cornwall နှင့် Devon - 99pts
2nd Place - '' အဆိုပါအမည်မဲ့ '- လန်ဒန် - 95pts
3rd Place - '' Quizzy Rascals '- Norwich - 89pts